FAQ - Ningbo Jiawei straps Co., Ltd
0086-574-88338218 / 88338215
Ratchet Tie Ezantsi
Umkhala & Bopha
sokutsala into ngentambo Umtya
Ingaba umnini womzi-mveliso okanye inkampani a?
Thina ngumvelisi, ngokukodwa ratchet tie phantsi, yilena ngenkwitshi, bethwele umtya njalo ukusukela ngo-2003, yaye nathi sibe neqela ukuthengisa, sele wakha intsebenziswano ishishini kunye nabathengi evela North America, eYurophu, eOstreliya, Asia, njl
Ngaba ukubonelela ngenkonzo OEM / ODM?
Ewe, siba abayili zobungcali iinjineli zinika inkonzo ebalaseleyo OEM / ODM.
Ingaba unayo isiqinisekiso?
Ewe, sibe ISO 9001: 2008 Isiqinisekiso inkqubo yolawulo lomgangatho kunye iimveliso zethu wafumana isatifikethi ka TUVGS.
Kuthekani logo eprintiweyo?
Ewe, logo yakho liprintwe kwi kwileyibhile okanye umtya, bangasebenzisa sticker.
na ukulawula njani umgangatho wakho?
1.Selection of high-high izinto
2.Production kwinkqubo yokumiselwa komgangatho, inkqubo emgangathweni, ukulungiswa.
3,100% Kugqityiwe Product Testing.
Uhlolo imveliso wesithathu 4.The zamkelekile.
EBanzi yoLawulo lweMigangatho 5.ISO System Eqinisekisiweyo Factory
6.Inspection phambi kulayishwa.
Njani ngexesha wophathelo?
ixesha Delivery iya kuba kwiintsuku 30-45. Sinento ishedyuli engqongqo imveliso. Xa sifumana umyalelo, siza bazobe ishedyuli eneenkcukacha. Emva kokungqina onke amasebe ngeentsuku ezi-3, siya kunika umhla wokusiwa ngqo.
Ningbo Jiawei straps Co., Ltd
Phone: 0086-574-88338218 / 88338215
Booth No.: 6.2B47, 29 Nov ~ 2nd Dec., 2017 Idilesi: National Conference and Exhibition (Shanghai)
China International Hardware Bonisa ...
Booth No.: 6.2D095, 22-24th, Oct, 2017 Idilesi: National Conference and Exhibition (Shanghai)